The Mara mma Lives of e bu n'afọ — njem Lee
The Mara mma Lives of e bu n'afọ
Ịkwada Lee on "Mara mma Life” si Ebe ọ chọrọ Chineke on Vimeo.
The mbụ song m dere n'ihi na m na-adịbeghị anya album, “The Good Life” bụ a song na-akpọ "Mara mma Life.” Ebe ọ chọrọ Chineke gwara m ka m banyere na song na obi m n'azụ ya. A bụ ha dum blog post.
Na ebe a bụ ihe lyrics na song, nke atụmatụ V. Rose:
Mara mma Life Inside
Bi na-akpụ akpụ na-eku ume
Ya mere, ka Hope Bilie
Chineke matara ihe Ọ na-eme
Mgbe O nyere
Mara mma mara mma Life
Ezigbo nwanne, M na-anụ ebe ị na
Amaara m na ọ na-adịghị ihe ọ bụla mfe n'obi na-aga site na
E nwere ihe a na nwa n'akpa nwa gị, ma unu adịghị agbalị ime na
Ị ga-ewere ya n'oge ọ bụrụ na ị maara na, ma ị na-adịghị a aidia na
Na oge na enyi gị nwoke, na abalị
Mgbe i chere ị na-eme ịhụnanya, na ị ga-eme ka ndụ
Na now na ọ na-enwe mmetụta ikenenke, nwoke ọ na-adịghị amasị
Ị na-adịghị nwetara a ndụ, gbaa, oge n'ezie adịghị mma
Apụghị nnọọ ịgwa gị na m na-aghọta ihe mgbu gị
Ma m maara na ị na-ekwesịghị inwe nkụda mmụọ ma ihere
Amakwaara m na nwa gị afo bụghị a egwuregwu
Ọ bụ onye obi kwaa, ọ bụ n'obi na-eto eto a obere ụbụrụ
Ọ bụ dabere na ya mama, Chineke ma ama ma aha ya
Na ị na-mere ke mbiet Abasi nakwa na nwa bụ otu ihe ahụ, nye ya ndụ
Mara mma Life
Ka ọ na Ndụ
nwanna ha hụrụ n'anya, Amaara m na eleghị anya ị na-ejide anọghị na nche
Site na nkpuru ya afo, otú obi gị mgbu na ike
na-enwe obi tọrọ atọ, dị ka ndị mkpọrọ n'azụ ndị Ogwe
The aka e si mesoo, ma unu adịghị wanna-ewe ndị kaadị
Homie stop, na-eche banyere oke
Na nwa nọ ya n'afọ, ọ na-adịghị n'ezie a olu
N'ihi ya, ọ n'ezie kwesịrị ya Papa, ahụ ịhụ ya n'anya na-aṅụrị ọṅụ
Ọ bụ ngọzi si n'aka Jehova, ọ dịghị mkpa ka e bibie
Ahapụla ya mama, ya n'anya ma na-akwado ya
Ọ bụ n'ihe mgbu ugbu a kwa, ya kwes ir onye e maka ya
Ma ekwela ka ya wutere gị, nwa nwanyị, ndụ ya n'akpa nwa
'Na-akpata homie ị ga-achọ na anya ya mara mma n'oge na-adịghị,
Hey adịghị na-m na-ezighị ezi, anya m kweere na ayi gēnye inyom ikike
Ma na-aga n'ihi na e bu n'afọ inyom oke, enye ha ndụ!
Ezigbo enyi, M maara nke a ekeme ndidi esibiak
N'ihi na ndị gị bụ ndị na-achọ gị gaara nyere nwa ọhụrụ ọmụmụ
Ma ọ akaha ugbu a, 'Ime ka nwa gị abụghị gburugburu
Amaara m na ọ na-ewute gị isi, na ikpe ọmụma na-akụda gị
Ma Enwere m Good News na ụfọdụ na-agwọ ọrịa gị na-ewute
Kraịst Jizọs bịara, Ọ gbadata gakwuru ụmụ Earth
Kama ọ na-abịa abịa ezi mmadụ ma ọ bụ ọbụna ndị dị nnọọ
Ọ bịara n'ụwa dị nnọọ ka mmehie dị ka anyị
Ya mere, yeah Ọ na-n'ezie mwute mgbe anyị na-a nwa ndụ
'Meenụ ka O mere ha, ma Ọ bịara ịzọpụta anyị n'aka ka ọnọdụ anyị
Ọ bịara na-enwu ìhè na ọ pụrụ ịzọpụta anyị n'aka anyị n'abalị
Ọ erases niile ihere, homie Ọ pụrụ ime ka anyị nri
Ekwupụta ya ma kwere na Onye-akwụ ụgwọ gị na-eri
Enye ama akpa gị ebe, e nwere mgbaghara na cross, Ọ pụrụ inye anyị ndụ
Chineke n'onwe nyere gị ndụ
Ọ ga-abụ nri n'ebe, nri n'ebe, nri n'ebe
Jackie • August 19, 2013 na 9:07 Abụ • zaghachi
N'anya Njem Lee!!! Amazing ukwuu okwu, ugbu a, m maara ihe na-ekwu na ndị mmadụ banyere ite ime!! ekele Njem!!
Diddleymomma • August 19, 2013 na 9:07 Abụ • zaghachi
Nke a bụ otú ịtụnanya. M na-anọdụ ebe a n'abalị nwanne ihe aborted nwanne. N'ihi na afọ m mama anyị otụhọde eziokwu na ọ naara a ndụ nwa. Ruo mgbe Jizọs hụrụ ya na ya olileanya adịghịzi hour, ọ nwere ike mgbe na-eche n'ụzọ zuru ezu na udo. Ugbu a Jizọs Onyenwe ya, ọ na-kpamkpam mere ọhụrụ. Ugbu a, ọ na-èkwuwàpụta ịdị mma na mgbaghara ya iji ọzọ ladies onye mere mkpebi Abort ụmụ ha.
M otu mama m. Your song n'ezie gburu obi m nke ukwuu. Daalụ maka niile ị na-eme! Ikpe ekpere maka unu mgbe niile!
Kilika Täbron • August 19, 2013 na 9:08 Abụ • zaghachi
Nke a video na-eme ka m ghọta na song ọbụna ihe.
Humdaddy • August 19, 2013 na 9:08 Abụ • zaghachi
A n'anya song. Ọ bụ a kpam kpam oké ncheta m ike ịnọgide na-ekpe ekpere na Chineke ga-akwụsị na-ete ime na America, ma na anyị kwesịrị ịgba ume eto eto ndị inyom na ndị ikom na ikike ọnọdụ na-adịghị asọ ha dị ka a na ha ọgụ na mgba na echiche nke ịbụ ndị nne na nna. Daalụ maka ndị dị otú ahụ na-agba ume song!
Sarah • January 22, 2014 na 8:37 pm • zaghachi
Njem lee ekele unu maka nke a song ọ mara mma ọ na-eweta m anya mmiri. Ụmụ bụ onyinye ọ ga-ewe 9 ọnwa nke ihe isi ike ịhụ onyinye , oh ma ọ bụ otú kwesịrị ya. Daalụ maka nke a song.